Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha Soomaaliya: Haloo gurmado dadka biyo la’aantu heysato – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Jaamac Axmed Maxamed (Oday) ayaa ku baaqday in gurmad deg deg ah lala gaaro dadka ay saameeysay biyo la’aanta ka jirto deegaanno ka tirsan gobollada ee dalka Soomaaliya.
Wasiir Jaamac Oday oo shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in biyo la’aanta ka jirta deegaanno ka mid ah gobollada dhexe ee dalka ay sababeen roobkii guga ee la sugayay oo soo daahay, isagoo xusay in ay lagama maarmaantahay in gurmad beni’aadanimo oo deg deg ah la gaarsiiyo goobaha ay saameynta ku yeeheen biyo la’aanta.
“Waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed cidkasta oo wax haysta inay gurmad u fidiyaan walaalahood Soomaaliyeed ee ay saameeyeen biyo la’aanta, waxaan kaloo baaq u jeedinayaa beesha caalamka, gaar ahaan dalalka deeq bixiyaasha ah inay kaalmo gaarsiiyaan meelaha ugu daran ee ay abaarta iyo biyo la’aanta ku habsatay” ayuu yiri Wasiirka Tamarta Jaamac Oday.
Wasiirka ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan aysan dooneyn in kaalmada la gaarsiinayo dadka tabaaleysan gacantooda la soo geliyo, balse waxa ay doonayaan tahay in dadkaas dhibaateysan loo gurmado.
Meelo ka mid ah gobollada Galgaduud iyo Hiiraan ayaa maalmihii lasoo dhaafay laga soo dheegayey biyo la’aan, taasoo meelaha qaar keentay in dad u dhintaan haraad ka dhashay biyo la’aanta iyo abaarta jirta.